Xbox Series X mukuyedza: Microsoft inosheedzera chizvarwa chinotevera - mutambo poindi - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Nov 13, 2020 | Hardware miedzo, nhau, Vhidhiyo mitambo
Iyo Xbox Series X, Microsoft ine simba inotevera-gen console, yavepo kwemazuva mashoma - uye "Team Xbox" iri kupemberera dema dema. Kwete chete nekuti iyo console hardware inomhanyisa mitambo yekare uye mitsva zvakanyanya, asi nekuti Microsoft iri kuunza maitiro kumagumo akatanga makore apfuura: Iyo Redmond-based kambani ine yakasarudzika nzwisiso yeinotevera-gen.
YeMicrosoft ndiko kuburitswa kweXbox Series X | Zvinopfuura kungorumbidza hardware itsva. Chokwadi, iyo koni inopa izvo zvakare: Simba rakawanda, kukurumidza kurodha nguva, nekukurumidza kutangazve, kunyangwe 4K mu120 Hz, chero iwe unayo. ine hardware yakakodzera. Hazvishamisi kuti mureza weMicrosoft unomhanyisa kutamba. Iyo slim block inoburitsa, inonakidza nekuita kwayo, asi inopa zvakanyanya kupfuura tekinoroji chete. Nekuburitswa kweXbox Series X | S Microsoft yakaunza maitiro agara kwemakore kusvika pakakwirira panguva ino.
Xbox Series X inopa mitambo yekare gumbo kumusoro
Kusvetukira kuXbox Series X kunokatyamadza, mukuenzanisa zvakananga neiyo yapfuura koni, zvisinei, idiki parizvino - zvishoma zvishoma. Izvo zvinopihwa graphically zvinogadziridzwa zvakadzama: yakawedzera kunaka mwenje mhedzisiro inowanzoonekwa mumitambo, kuenzanisa kwedzimwe nguva kunoshamisa. Assassin's Creed Valhalla paXbox One X uye Xbox Series X. Zvikasadaro, mafeni parizvino anobatsirikana kubva nekukurumidza zvakanyanya kurodha nguva. Asi haufanirwe kuzviramba se "zvakanaka kuva nazvo", kunyanya nemazita epasirese, akapfupikiswa, dzimwe nguva asingawanikwi ekurodha mabara anovimbisa kuti unogona kunyura zvakadzika munyika dzisina muganhu.
Kubva pakuona kwehunyanzvi hwekuona, iyo Xbox Series X inoita kuti software ishande neRDNA-2 GPU uye Zen-2 CPU kubva ku AMD. Iyo yakashambidzika block inopa anosvika gumi nemaviri teraflops, uye iyo console haina kunyanya kupisa, kunyangwe mukuenderera kushanda. Imwe mukana: Iyo Xbox Series X inomhanya zvinoshamisa chinyararire. Nekuda kwezviwanikwa zvitsva, mimwe mitambo yatowana kuwedzera kwechisikigo mukuita: Mifananidzo inozoratidzwa pa60 FPS, apo paXbox One X waifanira kunge usina kugutsikana. Misiyano yacho inoratidzika zvakanaka. Mitambo yacho inomhanya zvakapfava nekuti iyo Xbox Series X haina matambudziko nemazita ekumashure anowirirana ekutamba kune masimba ayo. Nekudaro, izvi hazvishande kumitambo yese, kunyanya yemazita ane FPS kukiya, iyo Series X haizo wedzera furemu manhamba. Pano, vanogadzira vanosungirwa kuendesa optimizations kuitira kuti mazita echikuru abatsirwe kubva kune zviwanikwa zvave zvemahara.
Pasi pechifukidziro cheperforated pane propeller ine simba pamusoro. Mufananidzo: Volkmann
Pane kunakidzwa paunobata Forza 4 zvakare, ino nguva mu4K uye ne60 FPS: Ipapo mubvunzo unokurumidza kumuka kuti waigona sei kuita mujaho wakanaka munguva yakapfuura uine yakaderera mhando zvachose. Zvakangodaro: Chaizvoizvo izvo zvave kupihwa iko kutanga kwechizvarwa chitsva. Iwe zvino uchafanirwa kumirira vanogadzira kuti vashandise zviwanikwa zvemagetsi zveXbox Series X nguva dzose uye nekunatsiridza mitambo yakanangana neiyo nyowani nyowani. Isu tinoziva zvakare kuti paXbox: Phil Spencer nguva pfupi yadarika akajekesa kuti mazita akakosha echizvarwa chitsva chekunyaradza achatangwa pamusika wemwaka weKisimusi wa2021. Ongororo inonzwisisika, nekuti vaparidzi nevagadziri vanoda nguva yekukwanisa kudana kuita kwakazara kwekoni.
Chimiro uye chimiro cheiyo nyowani console inotsigira iyo yakakosha tekinoroji chimiro. Kupisa kupisa kumusoro ipfungwa huru: mweya unodziya unosimuka otomatiki nekuda kwekudzikira kwayo, iyo hombe fan mukati meiyo console inosimbisa rudzi rwetunnel mhedzisiro kuitira kuti ugone kutonhodza Xbox Series X zvakanaka kunyangwe iri diki diki. Kunyangwe iyo Xbox Series X inogona zvakare kuiswa pasi, iyo koni inoita seisina kunyatsogadzirirwa iyo, iyo inoratidzwa neiyo base plate, iyo isingataridzike yakanyanya kunaka kana yakachengetwa yakatwasuka. Mushure mezvose: kune mapfumo madiki mana ekuvata pasi, asi isu tinofunga kuti kumira modhi yakanyanya kufanirwa nekuti iyo huru fan iri munzvimbo yepamusoro. Izvo zvishoma zvazvinofanira kutendeuka, iyo yakanyarara iyo console inozopedzisira yamhanya - izvi zvinofanirwa kutsigirwa nemhando yekuseta. Zvakangodaro: Iko hakuna zvakawanda zvekufunga kana zvasvika kune yekupaka kana yekuisa nzvimbo, iyo mhepo chete ndiyo inofanirwa kuramba yakasununguka, kuitira kuti yekubuda kwemhepo yekoni igopihwa kanenge hupamhi hweruoko - zvirinani zvichiri zvishoma - nzvimbo.
Iko kudzika kudzika kwekugadzirisazve kwemutongi hakuite senge zvakangoitika: iyo nyowani yekudzora unit ine bhatani rekugovana, inobata zvakanyanya kuseri uye munzvimbo yeinokonzeresa nekuda kwekutumira mameseji, asi neimwe nzira yave nehungwaru. yakavandudzwa pane kugadziridzwa patsva. Chete itsva sere nzira yekudzora pad inyaya yekuravira. Kunyangwe iyo control ichiita chaizvo, yakanyanya "crisp" pane, semuenzaniso, neD-Pad yeElite controller - uye "crisp" inofanira kutorwa sezvairi pano.
Simbisa: nguva pfupi yekurodha
Chimwe chezvimedu zvepakati - iyo Xbox Series X ine akati wandei - ndeyemukati NVMe SSD ine terabyte yekuchengetedza. Izvi hazvina kukura zvakanyanya nemaitiro anhasi, asi ndangariro inokurumidza zvinoshamisa. Izvi hazvingoshamisi, asi zvinotoratidza kuti zvinoshanda kana uchitamba: Nepo kurodha mabara aimbove mabhureki chaiwo pakunakidzwa, zvikamu zvemitambo zvino zvinomhanya zvisingaite. Iyo Xbox Series haingoreme zvakanyanya nekukurumidza pabepa, inocheka nguva mukudzidzira zvakanyanya. NeGears Tactics, kudzikisira kwakapetwa katatu kunogona kutariswa, neRed Dead Redemption 2 iyo nguva yekurodha inodonha kubva pamaminetsi akati wandei kusvika angangoita masekonzi makumi matatu uye neGears 30 nguva dzekurodha ipfupi zvekuti hautombodziona.
Izvo zvinongedzo, kusanganisira iyo slot yeplug-in NVMe SSD, iri kumashure. Mufananidzo: Volkmann
Iwe unofanirwa kuzvinzwira iwe pachako kuti shanduko yakakosha sei. Iwo manhamba akashama anoratidza izvo zvinonyatso kuoneka mumutambo zvekuti hauzomboda kuita usina mune ramangwana. Iyo ngano yepasirese yemitambo yenyika yaigona zvakare kuve yechokwadi pane consoles, kusvika zvino icho chaive chinhu chaingochengeterwa PC gamers neakakodzera NVMe hard drive.
Around 800 gigabytes yemahara memory anowanikwa kumitambo. Izvi zvinonzwika sezvizhinji, asi zvinofanirwa kuve zvakasimba mune ramangwana kana mitambo ine nzara-yendangariro ichionekwa - uye izvi zvinogona kuzowedzerwa nezvigamba uye nekuwedzera. Nenguva isipi iwe uchafanirwa kugara uchiisa nekubvisa mitambo kana kuburikidza nekuwedzera ndangariro.
Seagate Storage Yekuwedzera Kadhi, 1 TB yekunze SSD, ... * 219,90 EUR tenga
USB 3.0 hard drives inogona kubatanidzwa kuXbox Series X kutamba kumashure inoenderana mazita ayo asina kugadziridzwa yeSeries X. Kana iwe uchida kuita kwakanyanya kunosanganisira optimization, unogona chete kushandisa Microsoft yemukati ndangariro kana yakakosha ndangariro yekuwedzera - parizvino yakagadziridzwa mukubatana neSeagate: iyo NVMe yekuwedzera SSD yeXbox Series X | S inobata terabyte, asi inodhura 240 euros.
Microsoft inotevera-gen haisi hardware chete
Izvo Microsoft zvinonyatso nzwisisa neinotevera-gen haingori nyowani nyowani: Iyo Redmond-yakavakirwa kambani yanga ichishanda isinganeti kwemakore kuti igadzire yayo ecosystem yakatenderedza Xbox - uye iyo haisati yangove yakarongedzerwa kune console gamers. Microsoft inoshandisa chinzvimbo chayo seIT hofori uye inobatanidza nyika dzePC neXbox, munguva pfupi yapfuura neXbox Series X maitiro aya ave kusvika kumagumo: mitambo isingaverengeke inodzika pasi inoenderana; yekunyorera flat rate inogona kushandiswa paXbox nePC, uye ikozvino zvakare sevhisi yemitambo yegore iyo vatambi havafanirwe kubhadhara yakawedzera, asi iyo inokodzera zvisina musono muMicrosoft's microcosm.
Munzvimbo dzakawanda iwe unogona kunzwa kuwedzera kukura uye inotevera-gen. Mufananidzo: Volkmann
Iine akanyatsogadziridzwa mutongi weXbox Series X - uyezve chero imwe inoenderana neBluetooth controller - mitambo inogona zvakare kuridzwa pahwendefa kana mbozhanhare kana, zvirinani, ramba uchitamba. Microsoft iri kuvimba nechiitiko chekutamba icho, kunyangwe iyo nyowani nyowani hardware, haisati yangove yakanangana nekutamba pane yekutandarira TV. Iwe unogona kunzwa dhiraivha yeMicrosoft yekubudirira pamakona ese uye kumucheto kweXbox Series X. Haisi masanga kuti iyo console iri nyore uye inoyevedza uye haina kupenya uye ramangwana. Zvisinei nekufinha, kutarisika kuri nyore, hapana chaunopotsa maererano nemidziyo yehunyanzvi - uye ndiani anoziva: Zvichida chitarisiko chinoyeuchidza PC ndechimwe chiratidzo chakajeka chekubatanidzwa kwemapoka anonangwa. Hazvina mhosva kuti unomonyoroka sei nekuishandura: Nepasi pe500 euros chete, iyo Xbox Series X inonyaradza yakafanana nePC, asi modhi ine Hardware yaungazobhadhara kakawanda.
Pamwe pamwe nechishuwo chekuwedzera hunyanzvi mukuvandudza kwemitambo, zvichireva kuwedzera kwakasimba kweiyo Xbox mutambo studio, haugone kubvisa manzwiro ekuti Xbox Series X hakusi kupera kwemaitiro, asi kutanga.
Kare Just Dance 2021: kuburitswa kweazvino-gen consoles kunoitika
Inotevera Nintendo: Game & Watch: Super Mario Bros. Edition ikozvino muzvitoro
"Cool im Kreuzfeuer": nhandare yeshoo yekuburitswa kwebhuku
German Game Award 2019: Vakundi vakaziviswa
Valheim: Viking mutambo unokunda mazita epamusoro - ndiko kuseri kwebudiriro
Dune - Spice Wars: Pakupedzisira mutambo wemutambo weiyo chaiyo-nguva zano mutambo